First M.B;B.S (12/2018) Mathematics (Mathematical Logic)
First M.B;B.S (12/2018) Mathematics (2019PERMUTATION 2)
First M.B;B.S (12/2018) Mathematics (PERMUTATION First Lecture)
First M.B;B.S (12/2017) Zoology (Muscular system)
First M.B;B.S (12/2017) Myanmar (Theory Test 1 )
First M.B;B.S (12/2017) Physics ( Theory Test 1)
First M.B;B.S (12/2017) Chemstry (Theory Test I)
First M.B;B.S (12/2017) English
First M.B;B.S (12/2017) Botany
NERVOUS SYSTEM (5-7-2018)
Welcome to UMMG the future
I am very pleased to welcome you to the University of Medicine, Magway. Over sixteen years have passed from the establishment of this University in 2001.
The founding father of the University was Professor Than Myint presided as the first Rector. With the tireless energy and enthusiasm combined with his vision Dr Maung Maung Win, the second Rector had led so many to design the wonderful buildings and campus.
It is great honor for me to be the Rector of this University at this moment because I know we have some of the very best clinicians and teaching staff in Myanmar today for our students to deliver high class education in Medicine with particular regard to their application in health care.
The University of Medicine Magway is recognized by the government of the country for award of the medical degree that allows the practice of medicine in our country by graduate of the university.
Recognition of the University of Medicine Magway was granted on 14th December 2000 by the government. The date of instruction and the date classes began was 22nd may 2001. The graduate of the University of Medicine Magway become eligible for medical licensure on 3rd November 2007. Listed in the list of Avicenna Directory of Medical schools by WHO in 2011.
511 Current Total Staff
423 Current Teaching Staff
88 Current Office Staff
1811 Current Total Students
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား(၆.၈.၂၀၁၈)
(12.9.2018) ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ၀န်ထမ်းမိသားစု တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား
Ethics Review Committee (29-8-2018)
ပထမအမ်ဘီဘီအက်စ်(၁၂/၂၀၁၇) အာစရိယပူဇော်ပွဲ (၁၃.၈.၂၀၁၈)
(3.8.2018) ရက်နေ့ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေးမှ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရာထူးပြောင်းရွှေ့ တာ၀န်ထမ်းဆောင်မည့် ပါမောက္ခချုပ်၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်ဇော်အား ဂါရဝပြု နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း (၂၇.၇.၂၀၁၈)
“Awareness Raising Workshop on Implementation Research” (14.9.2018)
အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မောင်တူး (အရိုးရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်)၏ Medical Education နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဟောပြောပို့ချခြင်းနှင့် စာအုပ်များ ဆေးပညာဆိုင်ရာ DVD များလှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား(5-9-2018)
Workshop on Teaching of Medical Ethics in Foundation year of Myanmar (3-9-2018) to (4-9-2018)
Skill Training (5.6.18)
Knowledge Sharing Talk(6.6.2018)
Knowledge Sharing Talk (30.5.2018)
Awareness Raising Workshop on Medical Education (12.6.2018 -13.6.2018)
"Myanmar Medical Resource Center" online web postal တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း
About 63 rd Myanmar Medical Conference (Magway) in MMA Newsletter
63 rd Myanmar Medical Conference (Magway) Registration Form
၂၀၁၉-ပညာသင်နှစ်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေးတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
၂၀၁၈/၂၀၁၉ ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသား/သူများစာရင်း